WARBIXIN: Waa La Idiinka Digay! Sababihii Ka Dambeeyay Guuldaradii Liverpool Ka Soo Gaadhay Real Madrid. – Kooxda.com
HomeChampions LeagueWARBIXIN: Waa La Idiinka Digay! Sababihii Ka Dambeeyay Guuldaradii Liverpool Ka Soo Gaadhay Real Madrid.
April 7, 2021 Abdiwali Adan Jamac Champions League, Premier League, Wararka Maanta, Warbixino 0
Kooxda Real Madrid ayaa guuldaro xanuun Badan dhabarka u saartay Liverpool kulan ka tirsanaa lugta 1-aad ee wareega 8 dhamaadka tartanka champions leaue xilli ciyaareedkan.
Real Madrid ayaa min bilow ilaa dhamaadka ciyaarta ahayd kooxda fiican iyada oo Wiilasha Zidane si dhib yar u dhaafeen kooxda Liverpool kuwaas oo soo bandhigay qaab ciyaareed aad u liita.
Hadaba waxa aan Warbixintan ku soo bandhigaynaa sababihii ka dambeeyay guuldaradii Liverpool ka soo gaadhay Real Madrid.
Liverpool ayaa dib u soo celisay khaladaadka daafaca iyaga oo si weyn ugu dhibaatooday kulanka Taas oo keentay in ay Real Madrid ka faa’iidaysato waliba ka dhaliso goolasha ay dhaliyeen.
Xiddigaha Nat Philippes iyo Ozan Kabak ayaa qaab ciyaareed fiican soo bandhigay 4-tii kulan ee ka horeeyay kulankii Real Madrid laakiin waxa ay ku dhibaatoodeen in ay u babac dhigaan Real Madrid
Sidoo kale xiddigaha Andy Robertson iyo Trent Alexander-Arnold ayaa sidoo kale si weyn ugu dhibaatooday in ay soo bandhigaan qaab ciyaareed fiican kulanka.
Kooxda Real Madrid ayaa si fudud ugu guulaystay khadka dhexe taas oo door weyn ka qaadatay guusha ay Real Madrid ka gaadhay kooxda Liverpool iyada oo xiddigaha Luca Modric iyo Toni Kroos si dhib yar isaga maamulayeen ciyaarta.
Arintan ayaa ah Midii uu Rafa Benitez uga digay Liverpool isaga oo u sheegay in ay joojiyaan xiddigaha Kroos iyo Modric laakiin Liverpool ayaan wax dhag ah u dhigin talada tababarohoodii hore.
Taas ayaa keentay in ay 2-daas xiddig ku lu lahaadaan 3-dii gool ee ay Real Madrid dhalisay iyada oo uu Kroos laba gool ku lug lahaa halka uu Modric caawiye ka noqday goolka 3-aad.
3.Go’aanadii Jurgen Klopp:
Tababare Jurgen Klopp ayaa dhankiisa lug ku leh guuldarada soo gaadhay kooxdiisa kulankii champions League kadib markii uu qaatay go’aano Real Madrid u fududeeyay shaqadooda kulanka.
Go’aanka ugu horeeya ee khaladan ee uu Klopp qaatay ayaa ah in uu kulan sidan u weyn ku bilaabo xiddig aan muddo bilo ah ku bilaaban kulan waxana uu ahaa xiddiga Naby Kieta oo shaqada u fududeeyay xiddigaha khadka dhexe ee Real Madrid.
Sidoo kale Klopp ayaa ciyaarta 90 daqiiqo ku daayay xiddiga Sadio Mane kaas oo aan odhan karno waxa uu ahaa xiddigii ugu xumaa ciyaarta maadama uuna wax saamayn ah ku yeelan ciayarta waliba dilayay kubad walba oo loo dhiibo.
Goorma Ayay Man City Ku Guulaysan Kartaa Horyaalka Premier League.